प्रदेश नम्बर २ मा दलहरू : कसको तालमेल को सँग ? - Deshko News Deshko News प्रदेश नम्बर २ मा दलहरू : कसको तालमेल को सँग ? - Deshko News
प्रदेश नम्बर २ मा दलहरू : कसको तालमेल को सँग ?
स्थानीय हतको तेस्रो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश नम्बर दुईमा निर्वातनको मिति तोकिएको छ । प्रमुख दलहरु साेही तयारीमा जाेडताेडका साथ लागिरहेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।